7 အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပ၌ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းရှိသည်, ထိုသို့အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အကြားရေပန်းစားအားလပ်ရက် ဦး တည်ရာအောင်. ပြတိုက်, ပန်းခြံများ, အထင်ကြီးမှတ်တိုင်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်စွယ်စုံရွေးချယ်ရေး. တိုတိုပြောရရင်, အကယ်၍ သင်သည်အငြိမ်းစားယူလျှင်ဥရောပရှိမည်သည့်မြို့တွင်မဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟန်ဆောင်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်. သို့သျောလညျး, မြို့အနည်းငယ်သာအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားလာရန်လွယ်ကူပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသည်. သင်သည်ဥရောပ၌သင်၏အားလပ်ရက်စီစဉ်နေသည့်အခါ, အကြီးတန်းခရီးသွားတိုင်းစဉ်းစားသင့်သည်မှာသင်၏ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ဖြစ်သည်, လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု အဓိကဆွဲဆောင်မှု နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ, အကောင်းဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဘတ်ဂျက်နှင့်အားလပ်ရက်ကြာချိန်အပြင်.
ဒါကြောင့်, အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်ဥရောပသို့သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးထားပါသည်. ဒါကြောင့်, မင်းတို့ရဲ့ခရီးကိုကြိုဆိုဖို့ကြိုဆိုပါသည်7ဥရောပရှိအကြီးတန်း - ဖော်ရွေမြို့ကြီးများ.
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီး Eco-Friendly ခရီးသွားရန်ဖြစ်သည်. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝဘ်ဆိုက်.
1. အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ရောမမြို့, အီတလီ
ရောမသည်ဥရောပသို့အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်. ရှေးခေတ်ရောမမြို့, ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံး, ဟိုတယ်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လုံးဝလက်လှမ်းမီသည်. ဆိုလိုသည်မှာမြို့လမ်းဘေးရှိလူအားလုံးတို့သည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များအတွက်ချဉ်းကပ်လမ်းများရှိသည်, နှင့်မြို့တော်ကိုပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ကို၏, သင်လမ်းလျှောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
ရောမသည်မြင့်မားသောရာသီ၌အတော်လေးလူစည်ကားခံရဖို့ရရှိသွားတဲ့နေစဉ်, သငျသညျ Off- ရာသီခရီးသွားလျှင်, ကျဆုံးခြင်းအတွက်, ဥပမာ, သငျသညျနီးပါးလုံးဝကိုယ့်ကိုကိုယ်မှရောမမြို့ရှိရလိမ့်မယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများသည်ရာသီဥတုကိုကျဆင်းစေသည်, ထို့အပြင်, ကားတစ်စီးငှားရမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်စိတ်မပူပါနဲ့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဥရောပရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုရထားနဲ့ရောမမြို့သို့အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ထက်ပိုအဆင်ပြေဘာမျှရှိပါတယ် မီးရထားခရီးသွားလာ Trenitalia ၏မြန်နှုန်းမြင့်ခေတ်သစ်နှင့်အဆင့်မြင့်ရထားများတွင်. နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ရထားပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ရထားလက်မှတ်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ရနိုင်သည်.
Duomo နှင့်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီတို့၏ 'နောက်ဆုံးညစာ' သည်မီလန်အားအနုပညာနှင့်သမိုင်းချစ်သူများအတွက်ပရဒိသုဖြစ်စေသည်. ဗိသုကာကျောက်မျက်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, မီလန်အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အလွန်ဖော်ရွေသည်နှင့်ပင်အနိုင်ရခဲ့သည် 2016 အီးယူ Access ကို. ထို့ကြောင့်မီလန်သည်ဥရောပသို့အဆင့်မြင့်ခရီးသွားများအတွက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်.
သင်သည်သင်၏ 60 ရဲ့လွန်ခြင်းနှင့်လှပသောလူနေမှုအဘို့အဆင်သင့်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည် Milan ၌လုံးဝအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ကိုရရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါ အီတလီအစားအစာ, အဆိုပါ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ Basilicas ၏, အနုပညာပြခန်း, ပြီးတော့ပြတိုက်တွေကမင်းကိုတော်ဝင်မင်းလိုခံစားစေပါလိမ့်မယ်. မီလန်မှာ, သငျသညျကျိန်းသေတစ် ဦး ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်လူတန်းစား join သင့်တယ်, ပြီးပြည့်စုံသောခေါက်ဆွဲငံပြာရည်စာရွက်သင်ယူဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှကြောင့်သင်အိမ်ပြန် la Dolce Vita ထပ်မံဖန်တီးနိုင်အောင်.
3. အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
အချို့က Bruges သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့်အလယ်ခေတ်မြို့ဖြစ်သည်. Cobblestone လမ်းများ, ရောင်စုံအိမ်များ, Gothic ဗိသုကာ, အားလုံးသည် Bruges ကိုအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်ဥရောပရှိခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်. ထို့အပြင်, တူးမြောင်းတွေရှိတယ်၊ ခြေလှမ်းမလှည့်ဘဲခရုဇ်ကိုသွားပြီးဘရူဂျက်ကိုလေးစားတယ်, မဆိုအကြီးတန်းတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံ. ဒါပေမဲ့, သင်ဆဲခြေလျင်မြို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပိုနှစ်သက်လျှင်, မပူပါနဲ့, Bruges ဟာသိပ်ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းတဲ့မြို့တော်. ဒါကြောင့်, မည်သည့်ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်မှာအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ.
သင်အနည်းဆုံးရည်စူးသင့်ပါတယ် 3-4 ဖြတ်ပြီးရွက်လွှင့်ဖို့ရက်ပေါင်း 80 မြို့ရဲ့တူးမြောင်း၏နှင့် Minnewater အိုင်မှာအနားယူ. Bruges တွင်နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာမိသားစုအတွက်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့စျေး ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်.
Bruges ရှိဘူတာရုံသည်အကြောင်းပါ 10-20 မိနစ်များ’ မြို့လယ်ခေါင်ကနေလမ်းလျှောက်, ဒါကြောင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ယူကေမှာဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားနိုင်တယ်.
ရထားအားဖြင့် Bruges မှ Antwerp
ရထားအားဖြင့် Bruges မှ Ghent
4. Baden-Baden, ဂျာမနီ
ပဲရစ်မှရထားများနှင့်အတူ, ဘေဆယ်, ဇူးရစ်, နှင့်မြူးနစ်, Baden-Baden မြို့သည်အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အလွန်လက်လှမ်းမီသည်. ၎င်းသည်ဘာလင်ကဲ့သို့သောနာမည်ကြီးမြို့ကြီးတစ်မြို့မဟုတ်သော်လည်း, ၎င်းသည်လှပသောလူနေမှုဘဝ၏စံပြဖြစ်သည်. ဂျာမနီမှအိမ်ဖြစ်ပါတယ် 900 spa အပန်းဖြေစခန်းများ, ဒါပေမယ့် Baden-Baden ရဲ့အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်လူတန်းစားထိုသူအပေါင်းတို့ထက်ကျော်လွန်.
Baden-Baden ရှိ spa အားလပ်ရက်သည်ဥရောပရှိအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. အဆိုပါငြိမ်းချမ်းအရှိန်အဟုန်, ဓာတ်သတ္တုနှင့်ရွှံ့ spa ကုသမှု, Paradies ကဲ့သို့လှပသောဥယျာဉ်တော်, မိုa်းကောင်းကင်တစ်ဖဲ့ကိုဖန်တီးပါ. သို့သျောလညျး, သင်အားလပ်ရက်များ၌တက်ကြွစွာနေလိုလျှင်, ထို့နောက်ဂေါက်ကွင်းနှင့်အားကစားကလပ်များရှိသည် Baden-Baden မင်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်.
ဥရောပရှိအကြီးတန်းခရီးသွား cities ည့်သည်များသည်မြို့ကြီးများကိုလှည့်ပတ်ရန်စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနိုင်သည်, တောင်ကုန်းများနှင့်ခုန်ပေါက်နေသောလမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်၏အိပ်မက်မြို့တော်သည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဖြစ်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. မှန်ကန်သောအကြီးတန်း - ဖော်ရွေသောဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းသည်အာမခံကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်7အကြီးတန်းခရီးသွားများစာရင်းအတွက်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မြို့ကြီးများကျကွီးရှယျအိုမြားများအတွက်ဥရောပအတွက်အများဆုံးလက်လှမ်းမြို့ကြီးများပါရှိပါတယ်.
ရထားဖြင့်ဘာလင်မှ Baden-Baden သို့
ရထားဖြင့် Zurich မှ Baden-Baden
ရထားဖြင့်ဘေဆယ် - ဘေဒန်သို့
5. အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ဘာလင်, ဂျာမနီ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်စစ်အေးတိုက်ပွဲတို့၏ပြတိုက်များနှင့်အထင်ကရနေရာများ, ဘာလင်ကိုဥရောပရှိအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်တစ် ဦး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဦး တည်ရာကိုလုပ်ပါ. ဘာလင်ပြားနေတယ် အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကအရမ်းကောင်းတယ်, ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်နှစ်ခုလုံး. သငျသညျအကောင်းတစ်ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင် Segway ခရီးစဉ်အပေါ်မြို့စူးစမ်းနိုင်ဘူး.
6. အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
၎င်း၏ပါရုပ်သံလိုင်းများနှင့်အတူ, အမ်စတာဒမ်သည်ဥရောပရှိအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးခရီးဖြစ်သည်. အမ်စတာဒမ်သည်နယ်သာလန်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, ၎င်း၏ဖြေလျော့ပေးခြင်း Vibe နှင့်အရွယ်အစားကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. အမ်စတာဒမ်သည်အခြားဥရောပမြို့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်, ဒါကြောင့်သင်ကြည့်ရှုရန်နှင့် run ရန်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ.
သင်အလုပ်များသောမြို့ကိုငြီးငွေ့လျှင်, မြို့ပြင်ရှိကျော်ကြားသောကြိတ်ခွဲစက်များသို့သွားပါ Tulip လယ်ကွင်း, သင်နွေ ဦး ရာသီအတွက်ခရီးသွားလာလျှင်. သို့မဟုတ်သင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်၌ရှိကြ၏လျှင်, ဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းခြင်း နှင့်လှပသောမြို့ပတ်လည်စက်ဘီးတစ် ဦး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်.
7. အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
အံ့မခန်းဖွယ်ဗိသုကာ, တေးသံစုံကဇါတ်, နှင့်imperကရာဇ်နန်းတော်များကဗီယင်နာအားအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အံ့ဖွယ်ခရီးသွားရာနေရာဖြစ်စေသည်. အကယ်၍ သင်သည်ဘဝ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသောဘဝကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုပါကသင်ထိုင်။ အလုပ်ကြိုးစားမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်ဗီယင်နာကို ဦး. ထို့အပြင်, ဗီယင်နာသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကန့်အသတ်ရှိသောအကြီးတန်းခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်ဥရောပ၏ဒုတိယအများဆုံးသွားနိုင်သည့်မြို့ဖြစ်သည်.
ကိတ်မုန့်နှင့်သြစတြီးယား schnitzel အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် '' rooms ည့်ခန်း '' သြစတြီးယားကော်ဖီအိမ်များ, သင်မမေ့နိုင်သောအချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည်. ခရီးစဉ်၏ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းတွင်ပြရန်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အော်ပရာရုံသို့သွားပါ. နောက်ဆုံးတော့, ဗီယင်နာသည် Mozart နှင့် Schubert တို့၏ထူးခြားသောအပိုင်းအစများကိုရေးစပ်ခဲ့သည်, ဂီတနှင့်အနုပညာ၏မြို့.
ဗင်နီဒရီနန်းတော်သည်ဗီယင်နာတွင်မြင်တွေ့ရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ပန်းဥယျာဉ်များနှင့်စမ်းရေတွင်းများကဝိုင်းရံထားသည်, ဒါဟာထိုင်ပြီးပျော်မွေ့ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
မြို့လယ်ခေါင်မှာပဲ5ဗဟိုရထားဘူတာမှမိနစ်ခန့်ကွာ. ဒါကြောင့်, သင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှရောက်ရှိလာလျှင်, ဗီယင်နာခရီးသွားခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောဘာမျှမရှိပါ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းထဲရှိမည်သည့်မြို့များကိုမဆိုအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-travelers/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, tr သို့ pl သို့မဟုတ် nl နှင့်သင်ရွေးချယ်သောအခြားဘာသာစကားများကိုအစားထိုးနိုင်သည်.
ဥရောပသမဂ္ဂ ဥရောပအကြီးအကဲများအားလပ်ရက် europetravel Seniorseuropevacation ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း